Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo qaba in golayaasha xeer-dejinta loo daayo xallinta mushkilada taagan – Kalfadhi
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo-daareed oo maanta safar dibedda ah ka yimi ayaa ka hadlay shirkii madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad-goboleedyada uga socday Garowe ee lagu kala tegay.
Shir jaraa’id oo uu Garowe ku qabtay ayuu gudoomiye Dhoobo-daareed oo ay dhinacyada ka fadhiyeen labadiisa ku xigeen, wuxuu ku sheegay in ay ka xun yihiin in shirku uusan ku soo dhammaan sidii la rabay.
“Xukuumadaha waxaan leeyahay iyadoo aan ceebi jirin isu-tanaasula oo danta shacabka u naxa” ayuu yiri Gudoomiye Dhoobo-daareed.
Gudoomiye Dhoobo-daareed wuxuu muujiyay in baarlamanka federaalka ah iyo kuwa dowlad-goboleedyada oo beryahan lahaa dhaqdhaqaaq isku xirnaan ah in ay kaalin ka ciyaari karayaan xallinta mushkiladdan iyo in ay door ka qaataan arrimaha taagan.
“Dalka masiirkiisa waa la wadaagaa, haddii golayaasha fulintu is khilaafeen doorkayagii ayaa hadhay” ayuu yiri Dhoobo-daareed.
Hadalka gudoomiyaha ayaa ku soo beegmay xili uu toddobaadkii hore Xildhibaan Cabdirashiid Yusuf Jibriil oo ka tirsan golaha wakiillada Puntland muujiyay in uusan jirin wax la tashi ah oo ay xukuumadda iyo golaha wakiiladu ka lahaayeen qabsoomida shirka wada-tashiga madaxda DFS iyo dowlad-goboleeyada.